Boqollaal Dad Ah oo Ku Dhintay Dhulgariir Ka Dhacay Afghanistan | Onkod Radio
Boqollaal Dad Ah oo Ku Dhintay Dhulgariir Ka Dhacay Afghanistan
Muqdisho (Onkod Radio) – Ugu yaraan 255 qof ayaa ku dhintay dhulgariir cabirkiisu yahay 6.1 oo ku dhuftay koonfur bari dalka Afgaanistaan, sida ay saraakiil u hadashay Taliban ay sheegeen.
Dhul-gariirku wuxuu ku dhuftay meel 27 mayl (44km) u jirta magaalada Khost, oo ku dhow xuduudka waddanku la wadaago Pakistan, wuxuuna dhul gariirku ku dhacay 31.6 mayl (51km), sida ay sheegtay hay’adda sahaminta dhulka ee Maraykanka.
Wakaaladda wararka ee Afghanistan Bakhtar ayaa sheegtay in ugu yaraan 255 qof ay ku dhinteen, dhulgariirka ku dhuftay dalkaas.
Agaasimaha guud Wakaaladda wararka ee Afghanistan Bakhtar , Abdul Wahid Rayan, ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in 90 guri ay ku burbureen gobolka dhaca xadka Pakistan, tobanaan qofna la rumeysan yahay inay ku hoos jiraan burburka.
“Dhulgariir ba’an ayaa ku dhuftay afar degmo oo ka tirsan gobolka , waxaana ku dhintay oo dhaawacay boqolaal ka mid ah dadka waddankeenna, waxaana burburiy tobanaan guri,” ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka Bilal Karimi, ku xigeenka afhayeenka xukuumadda Taliban.
Waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay’adaha gargaarka inay kooxo degdeg ah ugu soo diraan deegaanka si ay uga hortagaan masiibo kale.
Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay dalka Afgaanistaan ​​ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo bini’aadantinimo tan iyo markii ay Taliban la wareegeen bishii Ogosto ee sannadkii hore, isla markaana ay ka baxeen ciidamadii caalamiga ahaa ee uu Maraykanku hoggaaminayay labaatan sano oo dagaal ah.
Waa dhaqaale aad u jilicsan, oo si weyn ugu tiirsan gargaarka, waxaa curyaamiyay cunaqabateynta reer galbeedka ee saaran waaxda bangiyada iyo balaayiin ka mid ah dhimista gargaarka – taasoo jawaab u ah la wareegidda Taliban.
Gariir ayaa laga dareemay meel u jirta 310 mayl (500km) ilaa 119 milyan oo qof oo ku nool Pakistan, Afgaanistaan ​​iyo Hindiya, Xarunta Seismological Seismological Center ee Yurub (EMSC) ayaa ku sheegtay barteeda twitter-ka.